Wararka - Saadaasha isbeddelka suuqa ee biibiilaha birta aan xuduud lahayn 2021
Intii lagu jiray muddadii Qorshaha Shanta Sano ee 13aad, 135.53 milyan oo tan oo tuubooyin bir ah oo aan xuduud lahayn ayaa laga soo saaray Shiinaha, wax soo saarka sanadlaha ahna waa qiyaastii 27.1 milyan oo tan, oo aan lahayn kor iyo hoos. Farqiga u dhexeeya sannadaha wanaagsan iyo sannadaha xun wuxuu ahaa 1.46 milyan oo tan, oo leh farqi u dhexeeya 5.52%. Laga soo bilaabo Noofambar 2020, qiimaha alaabta ceyriinka ah ayaa sare u kacay, qiimaha suuqa biibiilaha biraha aan xuduud lahayn ayaa sare u kacay. Ilaa Abriil 2021, qiimaha suuqa biibiilaha biraha aan xuduudka lahayn waxaa la dhihi karaa waxaa kaxeynaya alaab ceeriin ah.
Iyada oo looga baahan yahay “kaarboon gaadhaysa ugu sarraysa iyo dhex -dhexaadinta kaarboonka”, soo -saarka birta cayriin ayaa hoos u dhici doonta, iyo bilowga mashaariicda kaabayaasha iyo caan -ka warshadaha farsamaynta, biraha kulul ayaa u qulqulaya saxanka, baarka, rebar iyo usha siligga, iyo qulqulka tuubada madhan ayaa hoos u dhici doonta, sidaa darteed bixinta biilka iyo tuubada madhan ee suuqa ayaa hoos u dhici doonta, iyo qiimaha suuqa ee biibiilaha birta aan xuduudka lahayn ee Shiinaha ayaa sii ahaan doona mid sii adkaanaya rubuca labaad. Iyada oo ay hoos u dhacayso baahida loo qabo saxanka, baarka, rebar iyo usha siligga, bixinta tuubada madhan ayaa fududaan doonta rubuca saddexaad, iyo qiimaha suuqa ee biibiilaha birta aan xuduudka lahayn ayaa dhici doona. Rubuca afaraad, oo ay ugu wacan tahay xilliga degdegga ah ee dhammaadka sannadka, dalabka saxanka, rebar iyo usha siligga ayaa mar kale kululaan doona, bixinta tuubada maran ayaa adkaan doonta, iyo qiimaha suuqa ee biibiilaha birta aan xuduud lahayn mar kale.